I-Light & Spacious Garden Flat yaseLondon - I-Airbnb
I-Light & Spacious Garden Flat yaseLondon
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Tess
Umuzwa omuhle wasehlobo wale flat engadini evulekile. Amakamelo amabili okulala, indawo yokuhlala enepulani evulekile, ikhishi elikhulu kanye ne-conservatory enhle. Eduze kwesiteshi saseQueens park nawo wonke amabhasi. Izitolo ziseduze kakhulu kanye nezindawo zokudlela ezinhle zasendaweni. Zihlole ngokwakho ngalezi zikhathi.
Izinyathelo ze-Covid-19 :
• ZIHLOLE - asikho isidingo sokuhlangana mathupha sihlele ukuthi ubuyise okhiye bakho ngokuphepha uwedwa.
• Amahora angu-72 phakathi kokubhuka kokuhlanza nezinsuku zebhafa phakathi nalesi sikhathi.
• IZINKINGA ZOKUHLANZA zithuthukiswe ngokuphelele njengoba kunconywe i-CDC ( izindawo zokubulala amagciwane ngemva kokuhlanza / ilineni eliwashwe ekushiseni okuphezulu njll.)
• Kuhlinzekwa insipho yesandla, iphepha lasendlini yangasese namathawula ephepha kanye nemikhiqizo elwa namagciwane.
Sicela ungangabazi ukuxhumana nami ngezintengo zesikhathi eside, izaphulelo zingacatshangwa.
Itholakala esihlahleni esinokuthula nesithule esinomugqa womugqa.
Ifulethi lihlala kahle abantu abangu-5, kuzwakala sengathi ikhaya leholide lamukelekile kakhulu, lilula futhi libanzi.
Igumbi lokulala elikhulu elinosayizi omkhulu elinombhede we-Super King kanye nekhabethe elikhulu elakhiwe ngekhabethe.
Igumbi lokulala lesibili elinombhede olingana nenkosi ethokomele, ikhabethe lezingubo kanye nedeski.
Womabili amakamelo okulala athule ngokwedlulele.
Siphinde sibe nomatilasi oyedwa owengeziwe wesivakashi sesihlanu onganyakaziswa kalula ukuze uthole usizo olungeziwe.
Indawo yokuhlala inohlelo oluvulekile:
I-conservatory enhle enetafula lokudlela lamapulangwe elingenamapulangwe elilingana kalula nabantu abangu-6 abanezibani ezimbili ezilengayo zoqalo ezidala isimo sokudlela esihle kanye nebhentshi lewindi ukuze usebenzise ngokugcwele indawo ebheke engadini ebheke eningizimu.
Igumbi lokuhlala elithokomele eline-TV yekhebula lesikrini esiyi-intshi engu-42, itafula lekhofi kanye nosofa onethezekile onezingubo zokulala.
Ikhishi elikhulu elivulekile elilungele ukupheka elinomshini wokupheka wesimanjemanje, umshini wokuwasha izitsha, i-microwave, isiqandisi se-premium nesiqandisi, umshini wekhofi we-Nespresso, zonke izitsha ezidingekayo kanye nebha yasekuseni ewusizo.
Iwasha/isomisi sisesandleni sakho.
Igumbi lokugezela linebhavu elikhulu elizimele lodwa elilungele ukuphumula elineshawa ephathwayo, indawo yokubeka ithawula elishisayo kanye nokwengezwa kwakamuva kweshawa yemvula ehlukile entsha efakwe ihendisethi yesimanje.
Indawo esetshenziswa ngokukhethekileyo engadini enkulu ebheke eningizimu esanda kwakhiwa enebhentshi, itafula elisha nezihlalo emphemeni.
Ifulethi linendawo yalo yokungena ekunikeza ubumfihlo bokugcina.
4.89 · 211 okushiwo abanye
Itholakala ku-Queen's Park enamaqabunga, isemfashinini futhi ixhumeke kahle.
Izindawo zokudlela ezinhle namashibhi ku-Salusbury Road, izibiliboco zase-Italy kanye nendawo ye-pizza.
Isitolo sekhofi sasebhishi silungele i-brunch futhi imizuzu emi-5 nje ukusuka.
Ibhikawozi likaGail lesinkwa esisha nama-croissants.
I-salusbury pub, iphakethe lempisi kanye nendlu ka-Alice kusihlwa.
Zonke izitolo ezinkulu nezinhlobonhlobo zezitolo ku-Kilburn high road.
I-Queen's Park iqhele ngemizuzu emi-5, ilungele ukuhamba ngezinyawo nezinkantolo zethenisi nezinkundla zokudlala zokuzijabulisa izingane zabo bonke ubudala.
Taking in the varied cultures,…
Sikude nombhalo noma i-imeyili, uma kudingeka singaphinda sivele.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$379.
Hlola ezinye izinketho ezise- London namaphethelo